က၀ိပညာကျော်တို့၏ မျက်ရှု မြတ်တမန် (Text) - Islamic Religious Affairs Council
You are here: Home ကျမ်းဂန် က၀ိပညာကျော်တို့၏ မျက်ရှု မြတ်တမန် (Text)
က၀ိပညာကျော်တို့၏ မျက်ရှု မြတ်တမန် (Text)
Published: 01 January 1970 | Written by အလ်ဟာဂ်ျ ဦးညွန့်မောင်သျှိန် | Hits: 7560
အစ္စလာမ်ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အမှာစာမှ
တမန်တော်မြတ်သည် လူသားများအား သစ္စာတရားကို စတင်ဟောကြားတော်မူစဉ်က စ၍ လက်မခံ ငြင်းပယ်သူများအနက် အချို့တို့က မလိုမုန်းထားကာ တမန်တော်မြတ်အား အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် ကြံစည်ခြင်း၊ မဟုတ်တန်းတရား ပြောဆို စွပ်စွဲခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလေသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် (ယနေ့ကာလတိုင်)လည်း ထိုသို့ဆောင်ရွက်မှုများသည် နည်းလမ်း အမျိုးမျိုး၊ ပုံသဏ္ဍာန် အသွယ်သွယ်ဖြင့် ရှိနေပေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ပတ္တမြားမှန်လျှင် နွံမနစ် ဟု ဆိုသကဲ့သို့ တမန်တော်မြတ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းအောင် ကြံစည်ဆောင်ရွက်မှုများသည် အဆုံးတွင် ၄င်းအကြံအစည်များနှင့်အတူ ၄င်းတို့သည်သာ ဂုဏ်အင်နိမ့်ပါး အဆုံးသတ်သွားရသည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုသူတို့၏ ကြံစည်ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် တမန်တော်မြတ် ဟောကြားခဲ့သော သစ္စာတရားနှင့် တမန်တော်မြတ်၏ ဂုဏ်သတင်းသည် မှေးမှိန် သွားခြင်းမရှိရုံမျှမက ပိုမို ထွန်းလင်း ထင်ရှားလာပါကြောင်း ကမ္ဘာ့သမိုင်းက သက်သေထူနေပါသည်။
တမန်တော်မြတ်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ယထဘူတ ကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ပါက အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များသာမက အစ္စလာမ်သာသနာဝင်မဟုတ်သူများသည်ပင်လျှင် တမန်တော်မြတ်အား ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုကြရသည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ သုံးသပ်မှတ်ချက်ပြုကြသူပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များအနက် အချို့၏ မှတ်ချက်ပြုမူများကို စုစည်းထားသော Know This Manဟူသည့် စာအုပ်ကို အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ ဌာနချုပ်၏ အစ္စလာမ့်စာစဉ်အမှတ် ( ၄၈ )အဖြစ် ကဝိပညာကျော်တို့၏ မျက်ရှု မြတ်တမန် အမည်ဖြင့် ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။
ခရစ်နှစ် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ (၁၀) ရက်
ဟစ်ဂျရီ ၁၄၃၀ခုနှစ်၊ ရဗီအုလ်အောင်ဝလ်လ၊ (၁၂)ရက်
က၀ိပညာကျော်တို့၏ မျက်ရှု မြတ်တမန် (ဘာသာပြန်သူ - အလ်ဟာဂ်ျ ဦးညွန့်မောင်သျှိန်)
- သမိုင်း၏ စောစွာသောကဏ္ဍ အခြေအနေများတွင် များစွာသော အသေးစိတ် အချက်အလက်များအရ
သူ(“မုဟမ္မဒ်”)သည် ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော
အခြားပုဂ္ဂိုလ်မွန်များ၏ ကျေးဇူးသစ္စာ စောင့်သိခြင်းကို ခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပေသည်။
- “မုဟမ္မဒ်”သည် တမန်တော်များနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအနက် “အအောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်”ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာအယူဝါဒတစ်ခုသည် အင်္ဂလန်မဆိုထားဘိ ဥရောပနိုင်ငံများသို့တိုင် နောက်ထပ် နှစ်တစ်ရာအတွင်း လွှမ်းမိုးလာရန် အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့ပါလျှင် ၎င်းင်းသည် “အစ္စလာမ်”သာသနာပင်ဖြစ်နိုင်ပေမည်။
ကျွန်ုပ်သည် အစဉ်အမြဲ မုဟမ္မဒ်၏သာသနာကို အထင်ကြီး လေးစားခဲ့ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသာသနာ၏ အံ့သြလောက်အောင် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နေမှုကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် မြင်ရသည်မှာ“အစ္စလာမ်”တစ်ခုတည်းကသာလျှင် သူ၏အထင်ကြီးလေးစား ထိုက်သော စွမ်းရည်ကြောင့် လက်ရှိအခြေအနေ၏တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး ခေတ်တိုင်းနှင့်လည်း အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်အောင် ထိန်းညှိဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သူ့ကို (တမန်တော် မုဟမ္မဒ်ကို) လေ့လာပြီးဖြစ်ပါသည်။ သူသည် “ထူးဆန်း အံ့သြဖွယ်ကောင်းသူ” ပင် ဖြစ်ပေသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကတည်းက ခရစ်တော်ကို လက်ခံခဲ့သူမဟုတ်သော ကျွန်တော်၏ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောရပါလျှင် သူ့အား လူသားထုတစ်ရပ်လုံး၏ “ကယ်တင်ရှင်”ဟုပင် ခေါ်ဆိုရပေမည်။
အကယ်၍ သူ့ကဲ့သို့သော သူသာ ဤခေတ်သစ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမည်ဆိုပါက ပြဿနာ ကြီးငယ်တို့ကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး လိုအပ်နေသော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအ၀၀ကို အောင်မြင်စွာ ဖြည့်ဆည်းဆောင် ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် မုဟမ္မဒ်၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ “အစ္စလာမ်” ကို ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်မှာ မနက်ဖြန် (အနာဂတ်) အတွက် ဥရောပတိုက်အဖို့ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ ဘာသာတစ်ရပ် ဖြစ်သလို ယနေ့(ပစ္စက္ခအခြေအနေ)တွင် အစပြု ကျင့်သုံးလျှင် လည်း လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာဘာသာ ဖြစ်ပါသည်။
In " the Genuine Islam - Vol-1 No.8-1936
သူ(“မုဟမ္မဒ်”)သည် တစ်ကိုယ်တည်းနှင့် “ဆီဇာ”လည်း ဖြစ်သကဲ့သို့၊ “သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး”ကဲ့သို့လည်းဖြစ်ပါသည်။
သာသနာပိုင်ဖြစ်လင့်ကစား ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကဲ့သို့ သာသနာပိုင်အဆောင်အယောင်နှင့် ကိန်းခန်း ကြီးကျယ်ခြင်းမှကင်းသည်။
“ဆီဇာ”ဖြစ်လင့်ကစား “စစ်ဘုရင်ဆီဇာ”ကဲ့သို့ တပ်တောင်တာ ဗိုလ်ထုမရှိ၊ အခိုင်အမာ အမြဲတမ်း စစ်တပ်ကြီးလည်း မရှိ၊ သက်တော်စောင့် ကိုယ်ရံတော် တစ်ဦး တစ်ယောက်မျှပင်မရှိ၊ စံမြန်းရန် အဆောင် နန်းတော်တစ်ခုမျှမရှိ၊ အခွန်အတုပ် တစ်စုံတစ်ရာ စည်းကြပ်ခြင်းလည်းမရှိ။
လူတိုင်း အမှန်အတိုင်းပြောနိုင်သည့် အချက်မှာ မှန်ကန်သောကောင်းကင်ကျ လမ်းညွှန်ဥပဒေအတိုင်း တိကျစွာအုပ်ချုပ်သွားသူမှာ “မုဟမ္မဒ်”ပင်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်ကိရိယာတန်ဆာပလာ လက်နက်ယန္တရား ပစ္စည်းမျှမပါ။ မည်သည့် ထောက်ပံ့မှုမျှမပါရှိဘဲ အလုံးစုံ သော အချုပ် အခြာအာဏာကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့သူမှာ သူ ... “မုဟမ္မဒ်”ပင် ဖြစ်ပါသည်။
(ရဲဗ့်၊ ရဲန်ဒ်၊ ရီဂျင်နာလ်ဒ်၊ ဗောစ့်ဝါသ်စမစ်)
မိုက်ကယ်အိပ်ခ်ျဟာတ်က (ကျော်စွာတစ်ရာ စာအုပ်တွင်) မုဟမ္မဒ်အား အဆင့်(၁)ပေးရခြင်းမှာ သူသည် လူ့ဘ၀၏ ကောင်းစားရေး အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုနှင့် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အတွက် ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်က“မုဟမ္မဒ်”ကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် သြဇာတိက္ကမ အကြီးမားဆုံးထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်ကျော်မှတ်တမ်းတွင်အဆင့်(၁) ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စာရှုသူအချို့တို့အဖို့အံ့သြကောင်း အံ့သြမိပေမည်ဘ၀င်မကျဘဲစောဒကတက်ကောင်းတက်ကြပေမည်။
လူ့သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကို ကျနစွာဆန်းစစ် သုံးသပ် ကြည့်ပါလျှင်သူ(မုဟမ္မဒ်)တစ်ဦးတည်းသာလျှင် “ဘာသာရေး”နှင့် “လောကီရေးရာ” နှစ်ပိုင်းစလုံး၌ “အအောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်”တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ဤကဲ့သို့အဆင့်(၁)ပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
M.H.Hart In his book, THE 100
ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်မှာ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ အတွေ့အကြုံ အမြော်အမြင်အသိဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ပညာရှင်များကို စုစည်း၍ တစ်ပြေးညီ၊ မပြောင်းလဲသော အုပ်ချုပ်မှု၊ လူနေမှုစနစ်တစ်ခုကို ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း အခြေခံရေးဆွဲ ပြုစုတည် ဆောက်ရန်အချိန်မှာ သိပ် မဝေးကွာတော့ပြီဖြစ်သည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏လမ်းညွှန်ချက်များသာလျှင် တစ်ခုတည်းသောမှန်ကန်မှု၊လူသားထုတစ်ရပ်လုံး လူမှုဘ၀ ချမ်းမြေ့ သာယာပျော်ရွှင်မှုအတွက် ဦးဆောင်နိုင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
QUOTED IN CHRISTIAN CHERFILS' BONAPARTE ET ISLAM (PARIS.1914)
ကျော်ကြားသည့်သမိုင်းပညာရှင် လာမာတင် LAMARTINE -
အနည်းဆုံးသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအရင်းအနှီးကိုသာလက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အကြီးမားဆုံးသော လုပ်ငန်းကြီးကို အံ့အား သင့်လောက်အောင် ထမြောက်အောင်မြင်စေရန် စွမ်းဆောင်ချက်ကို လူသားထု၏ ထူးချွန်မှုပါရမီကို တိုင်းတာသည့်စံနှုန်း(တစ်နည်း)မှတ်ကျောက်သုံးချက်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပါ လျှင် ထင်ရှားကြီးကျယ်သူ မည်သူမဆို ခေတ်သစ်သမိုင်း၏ စာမျက်နှာတွင်ရှိသော “မုဟမ္မဒ်”ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်အံ့နည်း။
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် လက်နက်ဆန်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဥပဒေနှင့် အင်ပါယာများကိုသာ ထုတ်လုပ် ရေးဆွဲ ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် ရုပ်ဝတ္ထုစွမ်းအားများသာ ဖြစ်၍ အချို့သောသူတို့၏ သြဇာအရှိန်အ၀ါ ဆောင်ရွက်ချက် များသည် ၎င်းင်းတို့၏ မျက်မှောက်တွင်ပင် ကျဆုံးပြိုပျက် သွားကြကုန်သည်။
ဤပုဂ္ဂိုလ်(မုဟမ္မဒ်)သည် စစ်တပ်များ၊ တရားဥပဒေ ပြုပြင် ရေးဆွဲ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ အင်ပါယာနိုင်ငံများ (ဧကရာဇ် မင်း တစ်ပါး၏ပိုင်နက်)၊ လူသူအများနှင့် နန်းဆက် မင်းဆက် နိုင်ငံများ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုသာ ပြုလုပ်ခဲ့သည် မဟုတ်၊ ထိုစဉ်က ရှိခဲ့သော (သုံးပုံတစ်ပုံ)ရှိ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ၏ သန်းပေါင်းများစွာသော လူအုပ်စုကြီးကိုပါ ပြုပြင် ပြောင်းလဲပေါ်ထွန်းစေခဲ့သည်။ ထိုမျှပင်မကသေး ထိုခေတ် ကာလများတွင်ရှိခဲ့ သော ဘာသာအယူဝါဒများ ယုံကြည် စွဲလန်း ရာ (၀ိညာဉ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ)အတွေးအခေါ်အယူအဆများ ကိုပါ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
သူ၏ အောင်နိုင်မှုအတွက် သည်းခံထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်း၊ ဖြစ်မြောက်အောင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လိုသော ဆန္ဒအလုံးစုံ တို့သည် တစ်ခုတည်းသော အတွေးအခေါ် ဒဿနကိုသာ အာရုံ စူးစိုက်ဆောင်ရွက်အသုံးချခြင်းဖြစ်ပြီး အင်ပါယာ တစ်ခု တည်ထောင်ရန် အလျဉ်းမဟုတ်ပါပေ။
သူ၏စွဲမြဲစွာ ၀တ်ပြုမှု၊ ဗျာဒိတ်ရ၍ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်နှင့် ဆက်သွယ်မှု ၊သူ၏ ကွယ်လွန် ခြင်းနှင့် သူကွယ်လွန်ပြီးနောက် အောင်မြင်မှုတို့ကပင် သူသည် အယောင်ဆောင် အလိမ် အညာမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှား ပေါ်လွင်စေပြီး ခိုင်မာပီပြင် သော ယုံကြည်ချက်ကပင် သူ့အား ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ အယူဝါဒတစ်ခုကို ရှင်သန် လာစေခဲ့သည်။
ဤကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ အယူဝါဒတွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ပါရှိပြီး တစ်ပိုင်းက အရှင်တစ်ဆူဝါဒ(The unity of God)နှင့် ကျန်တစ်ပိုင်းက အလ္လာဟ်အရှင်၏ ရုပ်သဘောကင်းလွတ်မှု (The immateriality of God)ကိုပြသည်။ ပထမအပိုင်းသည် တုနှိုင်းမဲ့ ထာဝရ ကိုးကွယ်ရာ “အလ္လာဟ်”ဘာလဲ ဆိုသည် ကို ရှင်းပြ၍ ဒုတိယပိုင်းသည် ကိုးကွယ်ရာအရှင်သခင် မဖြစ် ထိုက်သည်တို့က ဘာလဲဆိုသည်ကိုပြသည်။ ဘုရားတု ဘုရား ယောင်များကို ဖြိုခွင်းပြီး ယုံကြည်ရာ အစစ်အမှန် တုနှိုင်းမဲ့ ကိုးကွယ်ရာအရှင်သခင်ကို တွေးခေါ် သည့် ဒဿန များဖြင့် ဝေဆာစွာ အစပြုခဲ့သည်။
အယူဝါဒပြုပြင်ရေး လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် (APOSTLE)၊
ဥပဒေပြုပြဋ္ဌာန်းသူ (LEGISLATOR) ၊
စစ်သူကြီး (WARRIOR) ၊
တွေးခေါ်မြှော်မြင်မှုဒဿနများကို ဟောကြားပို့ချအောင်နိုင်သူ (CONQUEROR OF IDEAS) ၊
ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ဆိုင်သော ကိုးကွယ် ယုံကြည်ရာ အယူဝါဒ ပြန်လည်ရှင်သန်စေသူ၊(RESTORER OF RATIONAL DOGMAS)နှင့် ဘာသာရေးအယူဝါဒကိုစွဲစွဲမြဲမြဲကိုးကွယ်ကျင့်သုံးမှုကိုရုပ်ထု(IMAGES)များ မပါဘဲ တည်ထောင်နိုင်သူဖြစ်သည်။
ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အင်ပါယာပိုင်နက် (၂၀)ကို တည်ထောင် ခဲ့သူနှင့် တစ်ခုတည်းသော နာမ်အင်ပါယာကြီး(SPIRITUAL EMPIRE)ကို တည်ထောင်သူမှာ “မုဟမ္မဒ်” ပင် ဖြစ်သည်။
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ၏ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကို တိုင်းတာသည့် စံနှုန်းများနှင့် ချိန်စက်တိုင်းတာမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ မိမိကိုယ်မိမိ ကောင်းစွာမေးမြန်းထားရမည်မှာ -
“သူ”( မုဟမ္မဒ်)ထက်သာ ပိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူ ရှိပါသလား? ဟူ၍ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အဲလ်ဖွန်စီ၊ ဒီ ၊ လာမာတင်
HISTORIES DE LA TURQUIE Paris 1854 VOL-II P.P 276-277
ဒီ ၀မ်းချမ်ဒ်း သျှရမားကရေးသည်မှာ -
သူ(မုဟမ္မဒ်)၏ညှာတာထောက်ထား ကြင်နာသောစိတ်နေသဘောထား နှင့် သူ၏အကြင်နာတရားများက ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင် ဘယ်သော်အခါမျှ မမေ့နိုင်ကြပေ။
အစ္စလာမ်၏ မြင့်မြတ်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုပုံရိပ်များကို မည်သည့်အခါမဆို မြင်နိုင်စွမ်း ရှိသော အရာများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်နှိမ့်ချပြောဆိုလေ့မရှိပါ။
တမန်တော်မြတ်ကို ဂုဏ်ပြု ချီးမြှောက်ရာတွင်လည်း လူသားတစ်ဦး၏ ကောင်းမြတ်သော ဂုဏ်၊ သမာဓိ သစ္စာတရားကို တိုင်းတာ သည်ထက် သာပိုလွန်ကျူး၍ မည်သည့် အခါမျှ တိုင်းတာ ခြင်း မရှိပါ။
သူ၏ ရှင်သန်လျက်ရှိသော ပညတ်ချက်၊ ၀ိနည်း၊ ကျင့်ဝတ်များကို သူ၏တပည့်နောက်လိုက် အဆွေတော်များက ကျေးဇူးတရားကို စောင့်သိမှုဖြင့် ကျိုးကြောင်း ဆင်ခြင်တုံတရား ဆင်ခြင်ဉာဏ်ကိုအသုံးပြု၍ အစ္စလာမ့်စည်းဘောင်များအတွင်းမှ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
Eward Gibbon and Simon Ockley, HISTORY OF THE SARACEN EMPIRE , London, 1870.p.54
THE FAMOUS POETESS OF INDIA.(SAROJINI NAIDU)
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၀တ်ပြုရန်အချိန် ကျရောက်၍ သံတော်ဆင့်မှ ၀တ်ပြုရန်
၀တ်ပြုသူများအားလုံး အတူတကွ စုရုံး၍ ၀တ်ပြုမည့်နေရာသို့ရောက်ကြရပါသည်။
အစ္စလာမ် က ကျင့်သုံးနေသည့် နေ့စဉ် (၅)ကြိမ် ၀တ်ပြုမှုတိုင်းတွင်
“တောင်သူလယ်သမား”နှင့် “ဘုရင်”ပင် ဖြစ်ပါစေ၊ ပခုံးခြင်း ယှဉ်လျက်
“ထာဝရကိုးကွယ်ရာ တုနှိုင်းမဲ့ အရှင် သာလျှင် အကြီးကျယ်ဆုံး”ဟု
အထင်အရှား သိမြင် ကြစေရန် တစ်ညီတည်း၊တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း၊
တစ်တန်းတည်း၊ ကြွေးကြော်နေခြင်းသည် “အစ္စလာမ်၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်”ကို
ကျွန်မ၏ စိတ်အသွင်ဝယ် ထပ်တလဲလဲ သိသာထင်ရှား လာစေသည့်အချက်မှာ
အစ္စလာမ်သာသနာ၏ လူမျိုး ဘာသာ မခွဲခြား၊ အသွေးအရောင် မပိုင်းခြားနိုင်သော
တစ်အူတုံဆင်း ညီရင်းအစ်ကိုပမာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သွေးစည်းညီညွတ်စေမှုပင် ဖြစ်သည်။
(S.Naidu IDEALS OF ISLAM; Vide Speeches & Writings . Madras 1918 . P. 169)
“ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကြီး” (The League of Nations)ကို အစ္စလာမ်သာသနာ၏ တမန်တော်ကြီးက တည်ထောင်ခဲ့ရာတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ညီညွတ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးညီရင်းအစ်ကိုပမာချစ်ခင်တွယ်တာရန် စည်းကမ်း ဥပဒေသများကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
<p>ထိုသို့ စကြ၀ဠာ ကမ္ဘာတစ်လောကလုံးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံ အုတ်မြစ်တွင် ဤကဲ့သို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်မှာ အခြားသောနိုင်ငံ များအား အလင်းဆောင် လမ်းညွှန်ရန် ဖြစ်သည်။ Prophet's Constrtution (Meesaaq-al-Madinah or sahifat-alMadinah)သည် ထိုစဉ်က ကျယ်ဝန်းလှသော (ယခုဆိုလျှင် အာရှတိုက် ဒေသအတွင်းရှိ) နယ်မြေဒေသများရှိ လူမျိုးစုံ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက် အစုံစုံ သော လူ့အဖွဲ့ အစည်းကို စုစည်းညီညွတ်သော လူ့အစုအဝေးတစ်ရပ် ပီပြင်စွာ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဦးတည် တည်ထောင်သောLeague of Nations</p> <p> -</p>ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ဝေါဟာရအရ လူ့သမိုင်းစဉ်တွင် ပထမဦးဆုံးရေးဆွဲသည့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေဖြစ်သည်။
ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည် ပုံပြင်ဆန်လှ၍ ဒဏ္ဍာရီပမာ ရှိသည့်အတိုင်း လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့၏ ဘ၀နှင့် ဒဿနများ ဆုံးရှုံးပျက်စီး ခဲ့ရမှုဖြစ်ရပ်များအစား ထူးကဲမြင့်မြတ်သော ဂုဏ်အဆင့်အတန်းမျှဝေရရှိရန် မြှင့်တင်တောင်းဆုချွေပေးသည့် လုပ်ဆောင်မှုတွင်လည်း အလျှဉ်း တုံ့ဆိုင်းမှု မရှိပေ။
သမိုင်းအခြေခံဖြင့်ပြောရပါလျှင် မည်သည့် ပုံပြင်၊ ဒဏ္ဍာရီပမာ ရှိသည့်ဖြစ်ရပ်များကမှ တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆောင်ရွက် ပြီးမြောက် အောင်မြင်ခဲ့သည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အပိုင်းအစငယ်မျှ အကျိုး ရလာဒ်ရရှိအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပေ။ သူ၏ ကြိုးစား ရုန်းကန် လှုပ်ရှားမှု အလုံးစုံတို့သည် လူသားထု တစ်ရပ်လုံးအား စုစည်း၍ ထာဝရ တူနိုင်းမဲ့ ကိုးကွယ်ရာအရှင် သခင်တစ်ဆူတည်း ကိုသာ စိတ်စေတနာ ကြည်ဖြူစွာနှင့် အကျင့်သိက္ခာမြင့်မား စွာဖြင့် ထားရှိကိုးကွယ်ရန်သာဖြစ်သည်။
မုဟမ္မဒ် (သို့မဟုတ်) သူ၏ နောက်လိုက်တပည့် အဆွေတော်များက မည်သည့် အချိန်ကမှ မည်သို့မှ သူ( မုဟမ္မဒ် )သည် ဘုရား၏ သားတော်ဖြစ်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ဘုရားဝင်စားသူဖြစ်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ထူးကဲ မြင့်မြတ် တော်မူသောသူဖြစ်ကြောင်း၊ မကြွေးကြော်ခဲ့ပါပေ။ သို့သော်လည်း သူ(မုဟမ္မဒ်)သည် အစဉ်အမြဲ ယနေ့တိုင် အများ လက်ခံယုံကြည်ထားသည်မှာ ထာဝရ ကိုးကွယ်ရာ တုနှိုင်းမဲ့ အရှင်သခင်၏ ရွေးချယ်ခံ တမန်တော်ပင်ဖြစ်သည်ဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။
ယနေ့နှစ်ပေါင်း (၁၄၀၀)ကျော်မျှ အချိန်များ ကုန်လွန်ခဲ့ငြားလည်း မုဟမ္မဒ်၏ ဘ၀နှင့် ဒဿန သွန်သင် ဆုံးမ သြ၀ါဒ များမှာ အနည်းငယ် စိုးစဉ်းမျှ ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ ပြောင်းလဲခြင်း တစ်စုံ တစ်ရာ ဖြည့်စွတ်ချက် မရှိဘဲ မပျက်မစီး တည်တံ့နေသည်။
အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တို့သည်လည်း ၄င်း သက်တော် ထင်ရှား ရှိစဉ် ကာလက ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ပင် အစဉ် ထာဝရ ဖြစ်တည်နေသော မျှော်လင့်ချက်နှင့် လူသားထု တစ်ရပ် လုံး၏ လူမှုကိစ္စဒုက္ခဆင်းရဲ ခြင်းအ၀၀ကို အကောင်းဆုံး ဖြည့်ဆည်း လျက် ရှိကြသည်။
ဤအရာသည် မုဟမ္မဒ်၏နောက်လိုက်တပည့်အဆွေတော်များက တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းမဟုတ်သလို မလွှဲမရှောင်သာသောမလွတ်ကင်း နိုင်သည့် အဆုံးနိဂုံးချုပ် အခြေအနေ ကျရောက်လာသည့်အခါ လူ့သမိုင်းစဉ်၏ ဘက်လိုက်မှုကင်း သော ဖြစ်စဉ်အရသာဖြစ်ရ လေသည်။
မုဟမ္မဒ်သည်ကျယ်ဝန်းနက်ရှိုင်းပြီးမတူကွဲပြားခြားနားသည့် လူ့ဘ၀နယ်ပယ်၏ တွေးခေါ် မြော်မြင်ခြင်းနှင့် ပြုမူနေထိုင်သည့် စည်းကမ်းကို စွမ်းအား ပြည့်ဖြင့် စံနမူနာပြုကာ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ အဖြစ် လူ့သမိုင်းစဉ်တွင် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက် အကောင် အထည် ဖော်ခဲ့သည်။
သူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသေးစိတ်နှင့် ဘ၀အခြေ အနေများ လူထုပရိတ်သတ်ရှေ့ဝယ် ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်းများကို သေချာ တိကျစွာ စာပေများဖြင့် ရေးသားမှတ်တမ်း ပြုပြီး ယနေ့အထိ သိမ်းဆည်းထားရှိခဲ့ပါသည်။ သူ၏ မှတ်တမ်း မှတ်ရာများသည် တိကျမှန်ကန်ခိုင်မာပြီး နဂိုမူလအတိုင်း ရှိပေသည်။ ထိုသို့ သစ္စာရှိစွာဖြင့် ခိုင်လုံစွာ သိမ်းဆည်းထားခြင်းကို သူ၏ နောက်လိုက် တပည့်အဆွေတော်များကသာ ပြုလုပ်ထားရှိကြသည် မဟုတ်ဘဲ သူ့အား အာဃာတဖြင့် အပြစ်ရှာ တတ်သူဝေဖန်ရေးသမား များကလည်းပြုစုသိမ်းဆည်းထားရှိကြပေသည်။
လူမှုရေးပြုပြင်မှုဝါဒီ (A SocialRefomer) ၊
အလွန် ကြီးမားသောအုပ်ချုပ်မှုယန္တယား၏အလုံးစုံဗျူဟာကို ချမှတ်သူ (An Administrative Clossus) ၊
ခင်တွယ်စရာကောင်းသော ဖခင်တစ်ဦး(A LovingFather) စသည့်ဂုဏ်ပုဒ်များ အားလုံးနှင့် ပြည့်စုံစွာ ရှိသူဖြစ်သည်။
သူ့ဘ၀၏ ကွဲပြားခြားနားသော ဤကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ချက် များတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်အောင်မဆိုထားဘိ၊ သူနှင့် သာတူညီမျှပင် သမိုင်းတွင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ချေ။
သို့ဖြစ်ရသည်မှာ မုဟမ္မဒ်၏ ကိုယ်ကျိုး အတ္တကင်းသော ဆောင်ရွက်နိုင်မှု စွမ်းရည် ကြောင့် မယုံကြည် နိုင် ဖွယ်ရာ ဖြစ်သော အထူး ပြည့်စုံ ကောင်းမွန် သည့် အကျိုး ရလဒ် များကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သိလိုခဲ့သည်မှာသန်းပေါင်းများစွာသောလူသားတို့၏ နှလုံးသားတွင် တိမ်းညွှတ်စွဲငြိစေပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အလျဉ်းမရှိ အကောင်းဆုံးပါဟု လက်ခံထားရသူ တစ်ဦးသည် မည်သူပါလဲဟူ၍ပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်ပို၍ သိရှိနားလည်သဘောပေါက်လာသည်မှာ ထိုခေတ် အခြေအနေများအရ လူနေမှုဘ၀အစုစုတို့၏ စီမံကိန်း (စနစ်) အတွက် အစ္စလာမ်သာသနာအနေဖြင့် နေသားတကျ ဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာ“ဓား”လက်နက်ကြောင့် မဟုတ်ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။
အတ္တစွဲကို ခြေဖျက်တတ်မှု ၊
သဘောတူညီမှုကတိက၀တ်များကို စောင့်ထိန်းလိုက်နာမှု ၊
မိတ်ဆွေ၊ တပည့်များအပေါ် ပြည့်ဝစွာတာဝန်ကျေပွန်မှု၊
“ကိုးကွယ်ရာထာဝရတုနှိုင်းမဲ့အရှင်သခင်” ကို အကြွင်းမဲ့ယုံပုံလွှဲအပ်ထားရှိသည့် ယုံကြည်ချက်သဒ္ဓါတရားရှိမှုနှင့်
တမန်တော်မြတ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဒုတိယတွဲကို ဖတ်ပြီး သောအခါ ဤမျှ ကြီးကျယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်မွန်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဖတ်ရန် ကျွန်ုပ်တွင် စာအုပ် နောက်ထပ် မရှိတော့၍ ၀မ်းနည်းမိပါသည်။
သောမတ်(စ)ကာလိုင်း၏ သူရဲကောင်းများနှင့် သူရဲကောင်းဆည်းကပ်ခြင်းဝါဒ စာအုပ်တွင်-
အကူအညီမပါဘဲ မည်သို့သော လူသားတစ်ဦးတည်းက ဖက်ပြိုင်စစ်ခင်းနေသော လူမျိုးစုများနှင့် ခရီးလှည့်လည် သွားလာနေသော (
Bedouins ) အရဗ်ကျေးတောသားတို့ကို ပေါင်းစပ်ညီညွတ်စေပြီး အင်အားအတောင့်တင်းဆုံးနှင့် ယဉ်ကျေးသော လူအစုအဝေး တစ်ရပ်၏ တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ရာစုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်နည်း ?
စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းဖြင့် စိတ်အားထက်သန်သူ ဤပုဂ္ဂိုလ်မုဟမ္မဒ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အနောက်နိုင်ငံများက အလိမ်အညာအတင်းအဖျင်းများစုပုံပြောဆိုနေခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ် ကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေအောင် လုပ်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။
နှုတ်ဆိတ်ပြီး ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သော်ငြားလည်း စိတ်အားထက်သန်၍ အလေးအနက် သဘောဆောင်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဤကမ္ဘာ လောကကြီးအား ပြုစုပျိုးထောင်သောဖန်ဆင်းရှင်က သူ့အား ဤကမ္ဘာကြီးကို လှုပ်ရှား နိုးထလာစေရန် တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်၏ ဘ၀၊ သွန်သင်ချက် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြောရာတွင်-
တစ်စုံတစ်ဦးအတွက် အရေးဗီးယားနိုင်ငံမှ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်လှသော တမန်တော်ကြီး၏ ဘ၀နှင့် ကြန်အင်လက္ခဏာများကို လေ့လာ ဆည်းပူးမည်ဆိုပါက ပြီးပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နိုင်ချေမရှိပါ။
အမြင့်မြတ်ဆုံးသော တမန်တော်တို့တွင် တစ်ပါး အပါအ၀င် ဖြစ်ပြီး ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သည့် ထိုတမန်တော်၏ ကြည်ညို လေးစား မြတ်နိုးဖွယ်ရာကိုမူ စိတ်အာရုံတွင် တစ်စုံတစ်ခုမုချထိတွေ့ခံစား ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်မတင်ပြမည့် အချက်များတွင် များသောအားဖြင့် အားလုံးကောင်းစွာ သိရှိထားပြီဖြစ်သော အရာများလည်းပါဝင်နေမည် ဖြစ်သည်ကို သိပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်မ အနေဖြင့် ထိုတမန်တော်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြန်၍ ပြန်၍ ဖတ်တိုင်း ဖတ်တိုင်း ချီးကျူး ထောပနာပြုမှု အသစ် အသစ် တစ်မျိုး၊ ကြည်ညို လေးစား မြတ်နိုးမှုအနှစ်သာရ အစုစုတို့ကို ထို “အရေးဗီးယားမှ သြဇာတိက္ကမရှိသောဆရာ”အတွက် စိတ်အလျင်ဝယ် သာယာထိတွေ့ခံစားမှုအပြည့်ရရှိပါသည်။
LANE - POOLE in Speeches and Table Talk of the Prophet:
လိန်း(န်)ပူလ်း၏မိန့်ခွန်းများ၊ ဟောပြောချက်များနှင့် စကားများမှ တမန်တော်မြတ်နှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြချက်များ</p> <p> -</p> <p>သူ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခံတို့အတွက် သူသည် ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံးသော၊ သစ္စာအရှိဆုံးသော ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သူ ဖြစ်သည်။</p> <p>-</p> <p>နှုတ်အချိုသာဆုံးနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် နှစ်သက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာကိုသာပြောသည်။</p> <p>-</p>
သူ့အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့သူတို့၏ ပြောခဲ့ကြသည့်အတိုင်း ဆိုရပါလျှင်-
ကျွန်ုပ် ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူသူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ ယခင်ကလည်း မတွေ့ခဲ့ဘူးပါ။ နောင်လည်းတွေ့မည် မဟုတ်ပါ။
သူ၏စစ်ရေးစစ်ရာအောင်မြင်မှုများသည် အကယ်၍သာ ကိုယ်ကျိုးအတ္တအတွက် ရည်စူး၍ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များဖြစ်လျှင် ဂုဏ်ယူစရာလည်းမရှိသကဲ့သို့ အချီးနှီး အလဟဿလည်း မဟုတ်ပါလားဟုသတိပြုမိပါသည်။
သူ၏ တန်ခိုးအာဏာအကြီးမားဆုံးသော အချိန်ကာလမှာပင် သူ(မုဟမ္မဒ်)သည် ရိုးရှင်းသော သူ၏ကိုယ်ကျင့်မူရာနှင့်စရိုက် သွင်ပြင်အနေအထားကို ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျ၍ စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည့် နေ့ရက်ကာလများကကဲ့သို့ပင် ထိန်းသိမ်း တည်တံ့စေခဲ့သူဖြစ်သည်။
သူ(မုဟမ္မဒ်)သည် တော်ဝင်၍ မင်းဧကရာဇ်တို့နှင့်သာ ထိုက်တန်သော “တိုင်း နိုင်ငံ အင်ပါယာ”ကို စိတ်ဝယ်စွဲငြိ ခင်တွယ်ရန်ဝေးစွ၊
အမေရိကန် စိတ်သရုပ်ခွဲပညာရှင်ကြီး ပါမောက္ခ ဂျူးလ်(စ်)မက်ဆာမင်း
PROF - JULES MASSERMAN of USA Psychiatric Association:
(၁) မိမိ၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ရှိသော သူများ၏ အကျိုးကိစ္စအ၀၀ကို သယ်ပိုးနိုင်ရမည်။
(၂) လူမှုဘ၀တည်ဆောက်ရာတွင် လုံခြုံမှုကို အာမခံချက် အပြည့်အ၀ရှိစေမည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို ထူထောင်ပေးနိုင်ရမည်။
(၃) ၎င်းင်းတို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော ယုံကြည်ချက်တစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်ရမည်။
ပါစ္စ်ချာ (Pasteur) နှင့် ဆာလ်က်ခ် (Salk)တို့ ကဲ့သို့သော ခေါင်းဆောင်များက “ပထမ”ကဏ္ဍကိုသာ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြသည်။
<p>ဂန္ဒီ (Gandhi) ၊</p> ကွန်ဖြူးရှပ်(စ်) (Confucius) ၊ အလက်ဇဲန္ဒား (Alexander) ၊ ဆီဇာ (Caesor) နှင့် ဟစ်တလာ (Hitler)တို့ကား “ဒုတိယ”ကဏ္ဍကိုသာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြသူများဟု ဆိုနိုင်သလို “တတိယ” ကဏ္ဍအပိုင်းကိုလည်း ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ဟုလည်း ဆိုနိုင်ကောင်းပါသည်။
ဤကဏ္ဍသုံးရပ်စလုံးကို တစ်ဦးတည်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်သူမှာ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် သာလွန် မြင့်မြတ်ကြီးကဲသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုရမည့် “မုဟမ္မဒ်” ပင် ဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော်မူစာ(မော်ရှေး)က တမန်တော် မုဟမ္မဒ်၏ နောက်မှ အနီးစပ်ဆုံး ကပ်ပြီး လိုက်ပါသည်။